Ọrịa mgbaka | Bromley, Lewisham & Greenwich Mind
Ị nọ ebe a: Home > Ọrịa Dementia
Nkwado MindCare Dementia
Nkwado MindCare Dementia na-enye ọzụzụ mgbaka, nkuzi na ndụmọdụ maka ndị ọrụ nlekọta mgbaka na ndị na-elekọta Bromley na Lewisham. Ọrụ ndị a dịkwa maka ịga akwụkwọ na mba ahụ.
Na mgbakwunye, ọrụ ahụ na-enye ndị nkuzi nlekọta na Bromley, Lewisham na Greenwich.
Ugbu a ụfọdụ n'ime ọzụzụ anyị dị na ntanetị ma anyị na-eme atụmatụ iji nye ihu oge ihu. Biko kpọtụrụ anyị site na iji ụdị iji mee ka anyị mara ihe ị chọrọ.
Ọzụzụ nhụjuanya anyị na ọkachamara na-enye anyị uru ndị a:
Mee ka njide ndị ọrụ dịkwuo mma site na imeziwanye ọrụ ndị ọrụ, obi ike na afọ ojuju ọrụ.
Belata nrụgide ndị ọrụ na enweghị.
Mee ka ọmịiko ndị ọrụ na nghọta nke ndị mmadụ bi na mgbaka dị mma.
Meziwanye nkwukọrịta n'etiti ndị gị na ọrịa ọgbụgba
Meziwanye nlekọta na ọdịmma maka ndị mmadụ na-arịa ọrịa mgbaka
Ohaneze imeputa ihe oma, gburugburu ebe obibi enyi na enyi maka onye obula.
Maka ndị nlekọta / ndị ezinụlọ
Mbelata na mmetụta nke iche.
Mkparịta ụka ka mma na onye a na-elekọta.
Nlekọta ka mma maka ọdịmma nke onye nwere nsogbu mgbaka
Ihe e kere eke nke gburugburu ebe obibi mara mma.
"Dị ka ezinụlọ, anyị ga-achọ ịkele MindCare maka oge, ndidi, enyemaka na nkwado anyị natara na-enweghị nke ndụ ga-esiri anyị ike karị."
Onyinye mmeri nke Mindcare Dementia Skills team nwere nghọta zuru oke banyere nyocha nke mgbaka gbakwunyere na ahụmịhe 25 afọ nke ịkwado na ọzụzụ ndị ọkachamara, ndị nlekọta na ndị ezinụlọ.
Ọrịa ịkwa ụfụ
Site na ịhọrọ usoro ọmụmụ anọ, ọzụzụ a bụ maka ndị na-arụ ọrụ n'akụkụ ma ọ bụ nwee mmasị na dementia. Ọzụzụ anyị ga-enye ihe ọmụma na nka achọrọ iji nye onye nwere isi mgbaka nkwado kachasị mma. A pụkwara ịhazi usoro nkuzi Bespoke, n'usoro nzukọ chọrọ.
Nlekọta ọrụ nlekọta
Enwere otutu ulo akwukwo, na-enye ihe omuma banyere oria ojoo na-elekwasị anya na omuma mmadu nke onye bi na oria. Nke a bụ ohere iji zute ma kesaa ahụmịhe na ndị ọzọ nọ n'ọnọdụ yiri nke a.
Nke a gụnyere onye otu Dementia Skills Team na-abịa n'ụlọ gị ma ọ bụ ebe a họpụtara iji nyere gị aka itinye usoro dị mma, nke dabara na mkpa nke onye ị na-elekọta.
A na-ahụ maka ndị nwere ikike ịka nka maka ọtụtụ ndị otu.